अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडी २१ दिनदेखि जंगलमा (भिडियोसहित) - dautarimedia.com
अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडी २१ दिनदेखि जंगलमा (भिडियोसहित)
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा जेवी विश्वकर्माले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा एक जोडीले आफुहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गरिरहेका छन् । आफुहरुले अन्तरजातिय विवाह गरेको र परिवारका सदस्यले नअपनाएका कारण जंगलमा आएर बस्नुपरेको बताएका छन् । भिडियोमा बोल्नेहरु कैलालीको भजनी नगरपालिका–४ झलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावल हुन् ।
उनीहरुले आफ्नो खुसीले विवाह गरेको भएपनि परिवारका सदस्यले ध म्की दिएका कारण जंगलमा बस्नुपरेको बताएका छन् । भिडियोमा कुन जंगल उल्लेख नगरिएको भएपनि भजनीको जंगल भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ट्वीटरमा अपलोड गरिएको भिडियोमा युवकले आफुहरुलाई रुकुम घटना दोहोरिन सक्छ भनेर चेतावनी आएका कारण डर लागेको बताएका छन् ।
युवतीले पनि जिवन रक्षाको लागि भिडियो सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बताएकी छन् । प्रकाशको आफन्तले दिएको जानकारी गराउँदै अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले सो भिडियो आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट पोस्ट गरेका छन् ।
भिडियोमा प्रकाशले विवाह गरेपछि परिवारले नमानेको हुनाले जङ्गलमा आउनुपरेको बताएका छन् । मालतीले भनेकी छिन्–‘हामीलाई धम्की दिएका छन् ।’ दम्पतीले आफूहरूले प्रेम गरेर विवाह गरेको र मालतीको पेटमा बच्चा भएको उल्लेख गर्दै टाढा हुन नचाहेको बताएका छन् ।
विवाह गरेलगत्तै युवतीका आफन्तले युवकलाई मा’रि’दि’ने, घर ज’ला’ई दिने चेतावनी दिएपछि उनीहरु जंगलमा बस्न बा’ध्य भएका हुन् । युवतीका आफन्तले रुकुम ह’त्या’का’ण्ड’ज’स्तै मा’रिदि’ने चेतावनी दिएपछि युवक त्र’सित भएका हुन् ।
"हामी भागेर जंगलमा बसिरहेका छौं"
कैलालीका भजनी नगरपालिका-४ भलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावल अन्तरजातीय विवाहका कारण भाग्दै जंगलमा बसिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उहाँहरुले जीवन रक्षाको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । प्रकाशको आफन्तबाट प्राप्त भिडियो@NepalPoliceHQ pic.twitter.com/BjF7bA1Ogo
— J B Biswokarma (@JBBiswokarma) July 9, 2021
Previous: अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट पठाउने टोलीमा नेपाली चेली सरु श्रेष्ठलाई विश्वबाट शुभकामना र बधाईको ओइरो !
Next: अभिनेत्री जेनी कुवँरको पशुपति आर्यघाटमा यसरी भयो अन्त्येष्टी, कलाकार को को पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्)